တရုတ်အပြားပြား gasket ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံပတ်ပတ်လည် | ဂျွမ်
silicone spliced ​​တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်
silicone Self- ကော်တိပ်
ပြားချပ်ချပ် gasket ပတ်ပတ်လည်
အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်
စံနှင့် Non- စံ
-40 ° C - 200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ပုံမှန်)
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ - ၁။ ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်တောက်ပမှု။
4. insulator တွင်လည်းမြင့်မားသောအပူချိန်။
၅။ နည်းပညာသည်ရင့်ကျက်။ တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။
6. Non- စံအစိတ်အပိုင်းများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်း ယူနစ် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းလမ်း silica gel
မာကျော ကမ်းက 70 50
ဆန့်နိုင်အား Mpa ၇.၆ ၇.၆
ခွန်အားကိုဆုတ်ဖြဲ KN / M ၂၂.၇ ၂၁.၆
linear ကျုံ့ %66
နိဒါန်း silicone တံဆိပ်ခတ်ဒြပ်စင်
100% silicone ကုန်ကြမ်း
ကမ်း Durometer တစ် ဦး 30shoreA-80shoreA
-60 ° C - 280 ° C (အထူး)
မှတ်ချက် - ၁ ။
၂။ အထူးအရောင်၊ အထူးအချင်းစသည်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
Jiangyin Jujie ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအထူးကျွမ်းကျင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆီလီကွန် ထုတ်ကုန်များ။ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်၊ အလင်းရောင်၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးနှင့်စက်ယန္တရားစက်ရုံများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဆီလီကွန်ရေပိုက်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ပိုမိုသောကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့် silicone gasket, fibreglass braided hose, silicone strip, silicone tube, အမြှုပ် silicone ရာဘာ၊Self- ကော်
၁ ။ ကိုးကားချက်ဘယ်တော့ရနိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုးကားချက်များ။ အကယ်၍ သင်စျေးနှုန်းရရန်အလွန်အရေးကြီးနေလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကို ဦး စားပေးဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
၂ ။ သင်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်နမူနာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းအတည်ပြုပြီးနောက်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်နမူနာများအတွက်သင်လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့သော်နမူနာကုန်ကျမှုသည်သင့်အားပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အမြောက်အများအော်ဒါအရေအတွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုချက်ကိုပြည့်မီပါကနမူနာကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်အမ်းနိုင်သည်။
၃ ။ အဘယ်အရာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခဲအချိန်ကော?
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ သင်မှာယူမဲ့အရေအတွက်နှင့်သင်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်မူတည်သည် ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်ထုတ်ကုန်များကိုသင်ရလိုသောနေ့မတိုင်မီတစ်လအလိုတွင်သင်စတင်စုံစမ်းရန်အကြံပြုပါသည်။
၄ ။ သင့်ရဲ့ပေးပို့မှုစည်းကမ်းချက်များကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် EXW, FOB, CIF စသည်တို့ကိုလက်ခံပါသည်။ သင့်အတွက်အသက်သာဆုံးသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
silicone o- ကွင်းနှင့်ဆီလီကွန် gasket
ရှေ့သို့ စက်မှု - အဆင့်ရှိ EPDM ဆီလီကွန်မြှုပ်စာရွက် / စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ဆီလီကွန်ရေပိုက်ဆီလီကွန်အပူကျုံ့ပြွန်
နောက်တစ်ခု: silicone ရော်ဘာတံဆိပျကို pad ပါ ဦး ထုပ်
silicone တံဆိပျကို o- လက်စွပ်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေအပူပေးစက်များအတွက် silicone တံဆိပျကိုလက်စွပ်
ဖိအား cooker ဆီလီကွန်ပူးတွဲလက်စွပ်
နံပါတ် ၃၄၅၊ တောင်ကျင်းလမ်း၊ ကွင်နန်း၊ ကွမ်ယန်း၊ ဝူစီ၊